Making Your Bed (Sariirtaada Gogol) - NETBEINS
:Making Your Bed (Sariirtaada Gogol)
Generaal William H. McRaven Waa hawlgab ka mid ahaa ciidamada Mareykanka ee Badda, waana taliyihii hore ee hawlgalkii gaarka ahaa ee Joint Special Operations Command (JSOC), sidoo kale waa taliyihii mar soo hoggaaminayey hawlgalka kale ee Special Operations Command Europe (SOCEUR), sidoo kale wuxuu mar u qaabilsanaa isku tagga ciidaamada ee waddamada ku bahoobay ururka […]
By admin August 29, 2019, 6:24 AM
Generaal William H. McRaven Waa hawlgab ka mid ahaa ciidamada Mareykanka ee Badda, waana taliyihii hore ee hawlgalkii gaarka ahaa ee Joint Special Operations Command (JSOC), sidoo kale waa taliyihii mar soo hoggaaminayey hawlgalka kale ee Special Operations Command Europe (SOCEUR), sidoo kale wuxuu mar u qaabilsanaa isku tagga ciidaamada ee waddamada ku bahoobay ururka NATO hawlka la yiraahdo Special Operations Forces Coordination Centre (NSCC).
Jaamacadda Texas ayaa ku casuuntay inuu la hadlo ardayda Jaamacaddaaa oo qalinjebinayey, si uu u dhiirrigeliyo, ulana wadaago waayo aragnimadiisa ku aadan Mustaqbalka iyo caqabadaha nolosha. Wuxuu u jeediyey qudbad aad caan u noqotay, oo uu kasoo qaatay Buug uu markaas qoray oo la yiraahdo (Making Your Bed) sariirtaada hagaaji. Wuxuu buuggu ku saabsan yahah 13 qodob oo ku saabsan casharradii nololeed ee uu ka bartay ciidamada laakiin anfacaya qof kasta oo doonaya inuu ka gudbo caqabadaha nolosha.
Qodobka kowaad, haddaad rabto inaad dunida badasho, Sariirtaada hagaaji markaad subixii ka kacdo. Wuxuu leeyahay haddaad subixii waxa aad qabato ka billowdo inaad sariirtaada hagaajiso, waxaad qabatay shaqadaadii ugu horreysay maalintaas, waxaad dareemeysaa kalsooni ah inaad hal shaqo oo ka mid ah shaqooyinkii kuu yaallay maalintaas aad qabatay, waxaadna dareemi qaneeco iyo isku kalsoonaan.
2: Haddaad rabto inaad adduunyada iyo dalkaaga badasho, raadso qof doonta kula wada. Qofna kaligiis waxba ma qabsan karo, sidaas darteed, waa inaad heshaa qof doonta usheeda kula qabta dhanka kale, waa doonta lagu wado alwaaxyada ee inta badan laga isticmaalo Webiyada iyo xeebaha. Sameyso qof aad nolosha isla wajahdaan oo aad is garab istaagtaan, sameyso saaxibbo badan intaad kari karto, hana ilaawin in guushaadu ku xirantahay dadka kale iyo xiriirka idin ka dhexeeya.
3: Ku cabbir qofka kartidiisa qaadka wadnihiisa ee ma ahan awoodda gacantiisa. Ciidamada badda marka la ciqaabo oo ay wax uun ku fashilmaan sida iney hagaajin waayaan sariirtooda, waxaa lagu ciqaaba iney xeebta ku wareegaan ilaa qofku inta daalo, wareero dhulka afka geliyo. Taas kama dhigna inuu qofkaas awood yaryahay ama ciqaabtaas uusan kareyn, laakiin waxaa laga yaabaa in qalbigiisu qaadi karo culus ka baran intaas una adkeysan karo. Noloshu ma ahan mid caddaalad ku dhisan, adigoo fiican ayey xumaan kugu abaal marisaa, adigoo xun ayey ku wanaajisaa rag iyo dumarba waxaa lagu qiimeeya sidey ula falgalaan caddaalad darrada nolosha ee kala duwan. Muhiim ma ahan sidaad u dedaashay, muhiim ma ahan ilaa inta aad hawlkar tahay, daacad tahay, noloshu mar walba waa tii kaa hiilisa, sidaas darteed naftaada ha eedayn, qofkale ha eedayn laakiin isku day inaad dhabar adaygto, dulqaadato aadna Mustaqbalka fog eegto horayna u socoto.
4: Haddaad rabto inaad dunida badasho u dulqaado golaha tijaabada. Ciidamadda baddu waxa ay leeyihiin gole ka kooban macallimiin, qubaro iyo halgamayaal kasoo tirsanaa muddo ku filan ciidamada kuwaas oo ay shaqadoodu tahay in ay soosaaraan keliya kuwa dusha adag, dulqaad ka leh, aan cabsan una dhabar adayga waxkasta oo ka hor yimaada. Macallimintaas hortooda waad ku fashilmeysaa, imtixaan ayaad ku dhacaysaa, waxbaa kaa qaldamaya laakiin intaas oo dhan waxaa loo sameynayaa inaad sameyso howsha lagaa rabo sida ugu fiican. Sidaas darteed haka baqin fashilka, golahaas wax ay noqon karaan maamulka shaqadaada, macallimiintaada ama tababarayaashaada sidaas darteed waxka baro, ka qaado qibraddooda. Hoggaanka guuleystay waa kuwa wax ka barta qaladaadkooda, kuna dabaqa casharradaas nolosha dambe, waa kuwaas kuwa aan ka baqin in ay qalad galaan oo aan iloobin casharka mar walba.
5: Haddii aad rabto inaad adduunyada badasho ku hor mar waxa kuugu adag ee ku horyaal. Noloshu waa halgan, culeys iyo mashaakil is daba yaal, waana lama huraan inaad la kulanto caqabad nololeed, laakiin kuwa ka baqa adayga, dhibka, shaqada adag iyo in ay wajahaan culeyska horyaal kuwaas waala hubaa in aysan marna hantinayn guusha nolosha dhabta ah
6: Ka hortag mugdiga. General McRaven’s waxa uu soo qaadanayaa talo uu siiyey mid ka mid ah macallimiintiisa. Waxa uu leeyahay waxa uu igu yiri macallinkaygu caawa habeenku waa mugdi, waa in aad soosaarta awooddaada iyo qofka ugu fiican ee aad noqon karto. Waa in aad iska saartaa cabsida, shakiga iyo daalka. Si kasta oo mugdigu u badan yahay waa in aad dhammeystirtaa dabaasha badda ee mugdiga ah, waayo markaad ku guuleysato howshaan kuu hartay caawa waa tan idin kaala saareysa adiga iyo qof walba oo kugu awood ah ama kuu dhow. Waxaan hubaa waqti ka mid ah noloshaada in aad mar uun wajihi doonto Mugdi badan oo noloshaada kahor yimaada, haddii uusan geeriyoon qof aad jeceshahay, hubaal in ay kaa hor-imaan doonaan wax kale oo nolosha kaa burburiya, sidaas darteed waa in aad barataa sidaad ku dhaafi lahayd mugdigaas. Waa in aad ka gudubtaa mugdigaas, aadna u dhawaata iftiinka ay u qalanto naftaadu, waayo qurux kasta waxaa ka soo horreeya mugdi badan iyo niyad jab.
7: Haddaad rabto inaad dunida badasho, qoorta ka cesho ciidda ama dhiiqada. Maalin uun waxaa hubaal ah inaad madaxa ciidda galin doontu, markaas waa maalinta aad qeyla dhaamin doonto, ubaahan doonto kuwa kuu dhow, kadibna aad dhoollacaddeyn doonto markaad soo noqoto. Markaas keliya ma dhiirragelin doontid inta kugu hareereysan iyo cidda kaa naxeysa, sidoo kale waxaad u noqon doonta tusaale ay ku daydaan, adiguna naftaada ayaad mahdin doontaa.
8: Gambeleelka haka dhawaajin. Waxkasta oo kugu dhaca, si kasta oo ay wax kuugu adkaadan weligaa ha joojin. Markasta oo wax kugu adkaadaan, xaaladdu kugu xumaato, natiijadii aad fileysay ay soo bixi weyso, weligaa ha is dhiibin ee markasta madaxa ku hay in uu jiro qof ku jira xaaladda aad ku jirto mid ka xun, kana caqabada badan. Kuwa aan si dhiibin, waa kuwa gurta miraha ay ka tageen kuwii is dhiibay ee deg degga ku quustay.
Buugga Make Your Bed, waa buug aad u kooban, gacan ku qabsi ah ayna ka buuxaan qibrado iyo casharro nololeed oo ka yimid mid kamid ah dadka ugu mudan ee wax laga baran karo maanta, waxaa kale oo Youtube ku jira qudbaddii buugga uu ka sameeyey Generaal ku ee uu ka jeediyey jaamacadda Texas.